Warshadda Jarmalka ee Giant Yacht waxaa abaalmarin laga siiyay Xafiiska Naqshadaynta Turkiga | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWaxaa naqshadeeyay Jarmalka Jarmalka Giant Yacht oo ka yimid Xafiiska Naqshadaynta Turkiga
Waxaa naqshadeeyay Jarmalka Jarmalka Giant Yacht oo ka yimid Xafiiska Naqshadaynta Turkiga
05 / 03 / 2020 34 Istanbul, 49 Jarmalka, YURUB, DUNIDA, SAWIRADA, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
yacht of Rafaa warshad weyn oo ka socota xafiiska naqshadaynta turkiga
“ICE Kite” waa 64 milyan oo yuuro qaali ah oo uu hindisay ganacsade reer Holland ah, Dykstra Naval Architects, oo la saxiixday mashaariicaha ugu caansan adduunka ee naqshadda yacht shirkadda caalamiga ah ee ku guuleysatay abaalmarinta maraakiibta Turkiga ee Red Yacht Design. Khadadkeeda casriga ah iyo isticmaalkeeda qaab dhismeedka dhalada waxay siinaysaa mudnaan ka dhexeysa doomaha waaweyn ee kale ee guryaha la midka ah. Marka la dhiso, waxay noqon doontaa doontii ugu dheerayd ee ka hoosaysa 500 oo tan oo culays ah. "Ka fikir dhinaca sanduuqa)" waa dulucda ugu weyn ee mashruuca.
Intii lagu gudajiray marxaladda naqshadeynta mashruuca ICE, Red Yacht Design, Dykstra Naval Architects iyo milkiilaha yacht waxay si adag u shaqeeyeen si ay u bixiyaan raaxada ugu badan marka loo eego 500 GT (culeyska tan) oo ay adeegsadeen aqoontooda. Mid ka mid ah astaamaha naqshadda ugu muhiimsan ee markabka ayaa ah isticmaalka dhalada, oo ka badan yakts dhererkan. Hadafka ugu weyn ayaa ah in la bixiyo muuqaal cajiib ah, halka meelaha gudaha ah ay helayaan iftiin badan oo ay ku dhex galaan bannaanka. Goobaha ku nool muraayadaha quraaradeed iyo bannaanka dibedda ee ballaaran ayaa milkiilaha siiya dareen aan dhammaad lahayn oo furfurnaan doonna. Dhiirrigelinta ugu weyn ee loogu talagalay naqshadaha dibedda waxay ka timaadaa dabeecadda, naqshadeeyaha ugu caansan ee abid la yaqaan. Milkiilaha markabku wuxuu ka codsaday Red Yacht Design inay naqshadeeyaan doonyo ay xayawaanku badda ku dhiirrigeliyaan, taasoo dareemeysa inay tahay qayb muhiim ka ah badda.
ICE Kite waxay leedahay meel furan oo ah 475 m2. Aagga xeebta ee dhinaca dambe ee berkadda weyn waxay leedahay furitaan ballaaran oo leh barkad dabaal iyo meelaha sunnooyinka laga helo heerar kaladuwan. Miiska cuntada iyo aagga baar ee loogu talagalay laba iyo tobanka waxay sare u qaadayaan farxadda bannaanka ee qoyska iyo saaxiibbada. Waxaa jira marin loo yaqaan 'qaanso qaanso ah' oo taabanaya oo tagaya dambasyada cidlada ah iyo kuwa aan la heli karin si loo fududeeyo gaadiid ku qaadashada sariirta.
Boosaska bannaan ee ku yaal buusha yar ee duusha ayaa leh labadaba asturnaan iyo xaflad leh bar-buuxa iyo barbecue iyo sidoo kale aragtida. Waxaad isku qori kartaa naftaada aaga deeqsinimada leh ee Jacuzzi oo ku hareereysan sariirro waaweyn oo madadaalo ah halka qoraxda la galayo.
Hoolka weyn wuxuu ka kooban yahay labo qeybood oo aragga iskuxiran: hoolka weyn iyo hoolka Kite (Kite), ayagoo markaas bixinaya aragti aan kala go 'lahayn oo ka socota salka ilaa qaansada. Hoolka weyn wuxuu ku habboon yahay in lagu nasto wakhti kasta oo maalinta ah oo lagu martiqaado dhammaan martida ku taal aagga gudahooda, iyo The Kite Lounge, oo loo rogi karo goob cuntada lagu ciyaaro ah oo ku taal aagga sare, ayaa si gaar ah loogu talagalay in lagu daawado duullimaadka korantada ee diyaaradda inta ay safrayaan. Aaggan aan caadiga ahayn waxaa ku hareereysan galaas wuxuuna bixiyaa aragti 180-heer ah.
10 qof ayaa lagu dejin karaa afar qol oo raaxo leh oo ku yaal dusha hoose. Muuqaalka ugu yaabka badan ee salka hoose waa xiriirka tooska ah ee guriga qolka milkiilaha markabka, laakiin aagga SPA, oo loo furi karo martida adoon wax u hurin sirtaada. Milkiilaha markabka ayaa go'aan ka gaari kara bal inuu ku raaxeysto HBS kaligiis ama martidiisa.
Qolka ballaadhan ee ballaadhan ee milkiilaha markabka, wuxuu ku dhacey marin gaar ah oo ka socota daaqadda weyn, oo leh laba musqulood oo kala gaar ah, xafiis iyo meel nasasho gaar ah, oo loogu talagalay inay ka soo baxdo dhammaan waxyaabihii uu ka filayey.
Dusha hoose ee hoose ee deedka ayaa ah qaybta shaqaalaha oo loogu talagalay dhammaan baahiyaha si taxaddar leh loo dhageysto.
ICE Kite waa bad-maax leh teknoolojiyadda cagaaran ee dhabta ah, oo loogu talagalay in si joogto ah loogu safro adduunka. Wadajir ahaan, nashqadeeyaha, milkiilaha doonyaha iyo kooxda injineeriyada ayaa isku keenaya shiraaca xarkaha iyo jumladda hoose ee ugu fiican iyo isticmaalka injiinka naaftada. Mulkiilaha markabku wuxuu qorsheynayaa inuu ku maareeyo isticmaalka yamantka barnaamijka qayb lahaanshaha, mar labaad iyadoo la adeegsanaayo falsafadda isticmaalka sahayda si macquul ah oo wax ku ool ah.
Hull waxaa loogu talagalay inay wax ku ool ahaato oo keliya xawaaraha ugu sarreeya laakiin dhammaan xawaaraha xawaaraha ku yaal oo dhan. Muuqaal kale oo muhiim ah ayaa ah inay bixiso raaxo sarre oo haysashada badda wanaagsan iyo yareynta hirarka.
Jirka ICE Kite waxaa loo qaabeeyey qaab dhismeedka aluminiumka ah, iyo dhismaha sare sida fiber kaarboon yareynta culeyska. ICE Kite wuxuu leeyahay xawaaraha ugu badan ee 2 garaacis oo leh 735 X 17,4 KW matoorka weyn.
ICE Ghost (Taageero Yacht)
ICE Ghost waa markab taageero doon ah oo 26 mayl ah oo si gaar ah loogu talagalay baahiyaha milkiilaha iyada oo ay naqshadeedu dibedda ku habboontahay badweynta ugu weyn ee ICE Kite. Wuxuu si joogto ah uga dhex socon doonaa gadaasha ICE Kite oo wuxuu ku qaadi doonaa alaabta caruusadaha doomaha ugu waaweyn meelaha fog ee milkiiluhu doonayo.
Ciyaaraha uu qaadi doono waxaa ka mid ah diyaaradda Icon A5, nooca loo yaqaan 'U Boat worx Super yacht Sub 3 submarine', doon 12 m ah oo si gaar ah loogu talagalay oo leh xawaare dhan 60 garaac, iyo laba bada jet-skis oo ay naqshadeysay oo ay soo saartay shirkadda loo yaqaan 'Red Yacht Design'. Dusha hoose hoostiisa waxaa ku yaal garaash weyn oo loogu talagalay qalabka quusitaanka iyo aag dayactir oo alaabada lagu ciyaaro. Waxaa jira 6-tan oo wiish ah oo ku taal bartamaha hoolka weyn ee loogu talagalay bilaabida howlaha.
Barxadda weyn ayaa isu beddelaysa goob weyn oo xaflad ah ka dib marka alaabada lagu ciyaaro oo dhan lagu tuuro badda. Si loogu adeego martida si hufan, jikada ayaa ku taal barxadda weyn. Afar marti ama shaqaale dheeri ah ayaa lagu dejin karaa laba qol oo mataano ah oo raaxo leh oo ku yaal daaqadda hoose.
ICE Ghost waxaa loo dhisi doonaa iyada oo loo eegayo kala soocida 'CE Ocean Class'. Iyada oo la tixgalinayo xaaladaha adag ee badda, jirkiisa waxaa laga sameyn doonaa bir, dhismaha sarena waxaa laga sameyn doonaa fiber carbon. ICE Ghost waxay leedahay xawaaraha ugu badan ee 2 garaac oo leh 800X 20 matoorada waaweyn ee HP.
Mulkiiluhu wuxuu cadeeyay inuu ka fiirsanayo dhisida doonida ugu weyn isla markaana uu taageero shixnad ah markab laga leeyahay Holland ama Turkish. Macluumaad dheeri ah ayaa la shaacin doonaa marka dhismaha la bilaabo.
Guud ahaan dhererka: 64.2m.
Ballac: 10.8 m.
Qoraalka: 1.76 m.
Maaddada: Aluminium jirka iyo Kaarboon-adaydhka Isku-dhafan ee Isku-Darka
Mashiinnada: 2 X Man V8 (735kW)
Xawaaraha ugu badan: 17.4Knot
Barokaca: 450 tan
Auxiliary Drive: 80 kW
Aagga Kite: 160 m²
Awooda Haamaha Shidaalka: 45.000 L.
Awoodda Banka Biyaha Fresh: 12.000 L.
Ferrarin Designer-ka oo la Kulmay Saxaafadda Turkiga
Xawaaladaha 4.4 bilyan oo doolarka dalxiiska Doha laba kooxood oo Turkiga ah
Dib-u-eegista taraamka dhismaha ee abaalmarinta
Shirkadda Jarmalka ee Uganda - Rwanda ayaa ku guuleysatay hindisaha dhismaha tareenka
Jarmal iyo Turki-ga Turkiga ayaa wada yimid
Dood-cilmiyeed Tareenka Teknoolojiyada Tareenka ee Turkiga iyo Jarmalka | Halkii Iibsan Lahaa Jarmalka…
BTSO waxay martigelineysaa Maalmaha Ganacsiga Turki-Jarmalka
RayHaber 05.03.2020 Warbixinta Shirka